Rclone 1.54.1: လက်ရှိတည်ငြိမ်သောဗားရှင်းအသစ်နှင့်အင်္ဂါရပ်များ | Linux မှ
ပြီးသားမတိုင်မီအကြိမ်ပေါင်းများစွာမီးမောင်းထိုးပြထားပြီးအဖြစ် အချက်အလက်များ၏ Periodic နှင့်စီစဉ်ထား backup လုပ်ထားလုပ်ဆောင်ပါ, ကိုယ်ပိုင်သို့မဟုတ်အခြားသူတစ် ဦး ဦး ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသို့မဟုတ်အလုပ်အကြောင်းပြချက်များကြောင့်ဖြစ်စေဒေသတွင်းနှင့်မိုးတိမ်၌၎င်း၊ လိုအပ်ပါကအော့ဖ်လိုင်းနှင့်ကွဲပြားသောနေရာများတွင်သိမ်းထားသော၎င်းတို့၏မိတ္တူများနှင့်အတူ၎င်းသည် အရေးကြီးသောကွန်ပျူတာလှုပ်ရှားမှု ငါတို့လျစ်လျူရှုမထားသင့်ဘူး၊
ဒီလိုလုပ်ဖို့အတွက် «FromLinux » ကျွန်ုပ်တို့သည်အမျိုးမျိုးသောယန္တရားများနှင့်ပတ်သက်သည့်လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုအခါအားလျော်စွာအဆင့်မြှင့်သည် software tools များ အကောင်းဆုံးသောနည်းဖြင့်ဤသို့သောအလုပ်ကိုလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်း။ ထို့ကြောင့်၊ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤနေရာ၌ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကိရိယာတစ်ခုနှင့်သက်ဆိုင်သောသတင်းအချက်အလက်ကိုအသစ်ပြုပြင်မည်ဖြစ်သည်၊ ၎င်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်နှစ်နှစ်ကျော်။ မှတ်ချက်မပေးဘဲခေါ်ယူခဲ့သည် "Rclone".
FreeFileSync - ဖိုင်များနှင့်ဖိုင်တွဲများကိုတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ရန်ပွင့်လင်းတဲ့အရင်းအမြစ်အက်ပ်
လှုပ်ရှားမှုများနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်သတိရရန်အရေးကြီးသည် ဒေတာအရံကူးခြင်းကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်ကြိုးစားအားထုတ်ရမည်မဟုတ်ပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်မကြာသေးမီကကြုံတွေ့ခဲ့ရသောအဖြစ်အပျက်များ၊ မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုဝမ်းနည်းဖွယ်သို့မဟုတ်အရေးကြီးသောကွန်ပျူတာဖြစ်ရပ်များ၊ ကိုယ်ပိုင်အသေးစား (သို့) ကြီးမားသောနှင့်တတိယပုဂ္ဂိုလ်များအချိန်မရွေးဖြစ်ပွားနိုင်သည်။ SEPE (ပြည်သူ့အလုပ်အကိုင်ဝန်ဆောင်မှု) de Espana နှင့် OVHcloud (ဥရောပ Web Hosting ပေးသူ) en ပြင်သစ်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ / ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လှုပ်ရှားမှုများသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့အလုပ်လုပ်သည့်အဖွဲ့အစည်းများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုထိခိုက်နိုင်သည်။
ဒါကြောင့်ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးတဲ့အခါ၊ ငါတို့နောက်ကိုလေ့လာဖို့အကြံပြုလိုပါတယ် ဆက်စပ်နေသော entries တွေကို ၏ဘာသာရပ်အပေါ် ဒေတာအရံကူးခြင်း:
Proxmox Backup Server သည် virtual environment များကိုအရန်ကူးခြင်းနှင့်ပြန်လည်ရယူခြင်းအတွက်ထုတ်ကုန်အသစ်ဖြစ်သည်
1 Rclone ဆိုတာဘာလဲ။
1.1 လက်ရှိတည်ငြိမ်သောဗားရှင်း 1.54.1
စကားလုံးများဖြင့် "Rclone" သည်အသုံးပြုရန်အလွန်အသုံးဝင်သော open source terminal (console) application တစ်ခုဖြစ်သည် ဒေတာထပ်တူပြုခြင်း (ဖိုင်များ / လမ်းညွှန်များ).
၎င်းသည် Nick Craig မှ Go Language ကို အသုံးပြု၍ ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့အား Cloud Services အကြားဖိုင်များနှင့်လမ်းညွှန်များကိုတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်နိုင်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ ၎င်းတွင်ဂူးဂဲလ်ဒရိုက်၊ Amazon Drive၊ S3, Dropbox, Backblaze B2, One Drive, Swift တို့ထင်ရှားသည်။ , Hubic, Cloudfiles, Google Cloud Storage၊ Yandex ဖိုင်များအြခားသူများအကြား။ " Rclone - ဖိုင်များနှင့်လမ်းညွှန်များကိုတိမ်များအကြားစည်းညှိရန်ခွင့်ပြုသည်
ထို့ကြောင့်၊ ဤအပလီကေးရှင်းကိုသင်လေ့လာလိုပါကအောက်ပါတို့ကိုလေ့လာရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့ဖိတ်ခေါ်ပါသည် ဆက်စပ်နေသော entries တွေကို သူမအကြောင်း
သင်၏ cloud သိုလှောင်မှု ၀ န်ဆောင်မှုများကို Rclone နှင့်စည်းညှိပါ
၎င်းတို့တွင်၎င်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများ၊ ထောက်ပံ့ထားသောသိုလှောင်မှု ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
လက်ရှိတွင် "Rclone" မိမိအခုနှစ် တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်, တူညီတဲ့၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏လက်ရှိပြည်နယ်ကိုထင်ဟပ်ဖို့အောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြထားသည်:
Cloud သိုလှောင်မှုတွင်ဖိုင်များကိုစီမံခန့်ခွဲရန်အသုံးပြုသည့် open command program တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Cloud ပံ့ပိုးပေးသူများ၏ဝဘ်သိုလှောင်မှုမျက်နှာပြင်များနှင့် feature များကြွယ်ဝသောအခြားနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ Rclone ကိုလက်ရှိ S40 object စတိုးဆိုင်များ၊ စီးပွားရေးနှင့်စားသုံးသူဖိုင်သိုလှောင်မှု ၀ န်ဆောင်မှုများအပြင်စံကူးပြောင်းခြင်း protocol များအပါအ ၀ င် cloud သိုလှောင်မှုထုတ်ကုန် ၄၀ ကျော်ကထောက်ပံ့နေသည်။ ထို့အပြင်၎င်းတွင် unix command များအနေဖြင့်အစွမ်းထက်သော cloud နှင့်တူသည်။ ဥပမာ - rsync, cp, mv, mount, ls, ncdu, tree, rm နှင့် cat ။ အကျွမ်းတဝင်ရှိသည့် Rclone syntax တွင်ပိုက်ပိုက်နှင့် –dry-run protection တို့ပါဝင်သည်။ ၎င်းကို command line၊ scripts တွင်သို့မဟုတ်၎င်း၏ API မှတဆင့်အသုံးပြုနိုင်သည်။ "
ပြီးတော့မင်းအတွက် လက်ရှိတည်ငြိမ်သောဗားရှင်း, အ အရေအတွက်အား 1.54.1 ရက်စွဲ 08 / 03 / 2021အများအပြားထည့်သွင်းခဲ့သည် သတင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ပြင်ဆင်ချက်အောက်ပါတို့အနက်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ဖော်ပြထားသည် -
Fixed bug များ (Bug fix): "စာရင်းကိုင်" တွင်တက်သို့မဟုတ်ဆင်းသက်မသန်စွမ်းသည့်အခါ "-bwlimit" fixed; docs တွင်ကွင်းနှင့် ellipsis ကို ftp စာရွက်စာတမ်းများ (edwardxml) တွင်တပ်ဆင်ပြီး၊ sftp စာမျက်နှာ (edwardxml) တွင်ကျိုးပဲ့သော link ကိုပိတ်ထားပြီး crypt.md ဖိုင်တွင်စာလုံးပေါင်းအမှားကိုပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
တောင်ပေါ်: "-daemon-timeout 10m" ကိုချိန်ညှိခြင်းဖြင့် macOS တွင် mount crash ကိုပြုပြင်သည်။
VFSဖြေ - တူညီတဲ့ cache ရှိတဲ့ document တွေကိုတပြိုင်နက်တည်းအသုံးပြုတာကိုအသုံးမပြုသင့်ဘူး။
B2ဖြေ - မှားယွင်းတဲ့အမှားတွေကိုရှောင်ရှားဖို့ upload limit ကိုအလိုအလျောက်တိုးမြှင့်ခဲ့ပြီး၊ ပရိုဖိုင်းကိုကန့်သတ်ထားတဲ့ application key ကိုသုံးတဲ့ဖိုင်စနစ်ကိုဖန်တီးတဲ့အခါပြတ်တောက်သွားတယ်။
မောင်း။ Team Drives အစား Shared Drives ကိုရည်ညွှန်းပြောင်းထားတယ်။
Dropbox ကိုဖြေ - oauth ကိုတောင်းဆိုဖို့ Scope တွေကိုထပ်ထည့်ပြီး "members.read" ကိုရွေးပါ။
S3- Fixed ဖိုင်စနစ်ဖန်တီးမှုသည်ဖိုင်တွဲခွင့်ပြုချက်များပေါ်လစီနှင့်ပြတ်တောက်သွားပြီး၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတစ်ခုတည်းကိုသာအသုံးပြုသောအခါ Wasabi HEAD တောင်းဆိုမှုများအတွက်ပြင်ဆင်မှုများ။
ဤရွေ့ကားနှင့်အခြားအသစ်အဆန်းကိုအောက်ပါအတွက်စူးစမ်းနိုင်ပါတယ် link ကို။ Download နှင့် Install လုပ်ရန်အတွက်သင်သည်အခြားတစ်ခုကိုရှာဖွေနိုင်သည် link ကို.
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" အပေါ် «Rclone 1.54.1»အသုံးပြုသောလူသုံးများသော console software ၏နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းဖြစ်သည် ဖိုင်များနှင့်လမ်းညွှန်များကိုတိုက်ဆိုင်ညှိယူပါ အမျိုးမျိုးသောအကြား cloud ဝန်ဆောင်မှုများ; တစ်ခုလုံးကိုအဘို့ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » ဖြန့်ဝေ » Rclone 1.54.1: လက်ရှိတည်ငြိမ်သောဗားရှင်းအသစ်နှင့်အင်္ဂါရပ်များဘာလဲ